Wasiirka A/Gudaha Soomaaliya Oo Shir Caalami Uga Qeyb Galaya Switzerland -News and information about Somalia
Home Warkii Wasiirka A/Gudaha Soomaaliya Oo Shir Caalami Uga Qeyb Galaya Switzerland
Wasiirka A/Gudaha Soomaaliya Oo Shir Caalami Uga Qeyb Galaya Switzerland
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta mundane Cabdi Maxamed Sabriye iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
Ujeedada socdaalka wafdigan oo matalaya dowladda Soomaaliya ayaa la xiriirta ka qeybgalka shirka heerka caalami ah ee guddiga sare ee fulinta hey’adda QM ee qaxootiga adduunka oo lagu qaban doono dalkaasi.
Kulankan oo ah kii 70aad aya waxaa iskugu imaan doono dalalka xubnaha ka ah, iyadoo Wasiirku uu ku matali doona Dowladda Soomaaliya.
kulanka ayaa lagu qaadaa dhigi doonaa arrimaha qaxootiga adduunka, sidoo kalana lagu ansixin doonaa qorshe sanadeedka iyo miisaaniyadda hey’adda UNHCR.
Soomaaliya ayaa shirkan waxaa uu yahay fursad gaar ah,waxaana wafdiga lafilayaa in ay ku soo bandhigaan halkaasi daruufaha haysta qoxootiga iyo Barakacayaasha Soomaaliyeed.
Previous articleAkhriso:-Somalia Oo Dacwad Ka Dhan Ah Kenya U Gudbisay QM Iyo Sababta Keentay
Next articleIsbedal doonka Jubbaland oo madaxdii hore ee dalka ku eedeeyay in qorshe doorasho ay ka leeyihiin Jubbaland
WARBIXIN: Maxaa keenay Jahawareerka siyaasadeed & Hadalada iska soo horjeeda ee...